Rikooo विमानस्थल 3d v4 तयार गर्न कुनै काम छैन
प्रश्न Rikooo विमानस्थल 3d v4 तयार गर्न कुनै काम छैन
2 वर्ष3सप्ताह पहिले #643 by brunoeduardo
3d v4 तय गर्ने नयाँ संस्करणमा केही समाचारहरू?
2 वर्ष 1 हप्ता पहिले #663 by Howlak
मुख्य शीर्षक सही छैन, जस्तै सबै Rikoo FSX विमानले काम गर्दैन .:
Rikoo एड्सको मुख्य विकासकर्ता होइन। धेरै FSX NATIVE विमान P3D V4 मा काम गर्दछ, या तो मूल या Rikoo द्वारा modded। तर FS9 पोर्टल गरिएको विमानले काम गर्दैन।
2 वर्ष4दिन पहिले #667 by macca22au
मान्छे, धेरै कम वा कुनै FSX वा FS2004 विमानले P3Dv4 मा काम गर्नेछ।
अधिकतर P3d v3 विमान, विशेष गरी एफएमसीसँग जटिल विमान P3D4 मा काम गर्दैन
P64D3 को 4bit वास्तुकला, मतलब छ कि केहि विमान, दृश्य आदि आदि केहि परिवर्तन को लागि उपयुक्त हुन आवश्यक छ।
म लेखकहरु को धेरै डाउनलोड को यहाँ आग्रह गर्दछ कि उनको add-ons को अद्यतन मा काम गर्न को लागि।
1 वर्ष4महिना पहिले #946 by DRCW
क्रिस ईभेन्सले पनि सबै गरिसकेका छन् र जब उनले V4 मा काम गर्दछ एक विमान को रिलीज गर्दा होइन। यो बुझ्न, तपाइँले यी कीगहरू काम गर्न बाहिरको लागि अनुमति दिनुपर्छ, एक एक एक। अरू विमानहरू गर्दा केही विमानले काम गर्नेछ, यो सरल हो। काम नगर्ने कुनै पनि स्थापना रद्द गर्नुहोस् र क्र्यासहरू उत्पन्न गर्दैछ। केही पर्खनुहोस्, पढ्ने फोरमहरू, र फ्रिभेटमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नेहरूका लागि हेर्नुहोस्, बगहरू तय गर्नुहोस्। यी मध्ये अधिकांश त्रुटिहरू कोडमा परिवर्तनहरूमा छन् जुन3बिट 32 बाट P64D मा परिणत गर्दछ। अन्तमा यो राम्रो मूल्य हुनेछ। सायद एफएसडब्लु बिर्सन्छ ... दृश्य फाइलहरू P3D v4 मा सबै काम लाग्दछन्। मेरो सबै फोटो दृश्यहरू डाउनलोड गर्न सक्षम थियो। त्यो दृश्य दृश्य फाइलहरू बनावट भन्दा बढी छैनन् किनभने विमान र अपरेसन र सूत्रहरूमा धेरै अधिक समावेश छन्।
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.207 सेकेन्ड